मोटि युवतिले जबरस्ति यौन सम्प।र्क गर्दा थिचेर यु वा को मुर्त्यु भयो ?? – Sandesh Press
मोटि युवतिले जबरस्ति यौन सम्प।र्क गर्दा थिचेर यु वा को मुर्त्यु भयो ??
November 8, 2021 894
एक १९ वर्षकी किशोरीले दावी गरेकी छिन् कि जब उनी रातमा एक युवकको कोठामा गइन् त्यही बेला अचानक युवकका अन्य ११ जना साथीहरु आए र सबैले करणी गरे । घटना साइप्रसको हो, जहाँ बेलायती कशोरी एक सस्तो रिसोर्टमा बसेकी थिइन् । किशोरीले आफू एक युवकसँग कोठामा भएको स्वीकार गरेकी छिन् ।
किशोरीको उजुरीपछि सबै १२ जना युवकविरुद्ध करणीको मुद्दा चलाइएको छ । आरोपी सबै युवकहरु इजरायलका हुन् ।
किशोरीका अनुसार ती युवकहरुले उनी बे’होस भएपछि मात्र छोडेका थिए । किशोरीको श’रीरमा चो’टका कैयौं निशान पाइएका छन् । किशोरी साइप्रसको अयी नपा शहरमा पेम्बोस नपा रक्स होटलमा बसेकी थिइन् ।
पुलिसले सबै युवकहरुलाई पक्राउ गरेको छ । युवकहरुलाई बिहीबार अदालतमा पेश गरियो । पुलिसले डिएनएको जाँच रिपोर्ट पर्खिरहेको छ । स्थानीय मिडियामा एक युवक र पीडित युवतीको इन्स्टाग्राम म्यासेज पनि प्रकाशित गरिएको छ ।
पुलिसका अनुसार किशोरी नयाँ होटलमा सरेकी छिन् र उनलाई काउन्सिलरको सुविधा उपलब्ध गराइएको छ । बेलायती दूतावासले पनि किशोरीसँग सम्पर्क गरेको छ ।
एयर क्यानडाकी एक यात्रीले चालक दलका सदस्यको गल्तीका कारण निकै खराब अनुभवबाट गुज्रनु पर्यो । महिला क्यूबिकबाट पियर्सन इन्टरनेशनल एयरपोर्ट जाँदै थिइन् । विमानले उडान भरेपछि ती महिला निदाइन् ।
जब उनको आँखा खोलियो तब विमानभित्र पूरा अँध्यारो थियो ।
त्यहाँ न यात्री थिए, न चालक चलका सदस्य । विमान पार्किङ एरियामा थियो । यो पूरा घटनाक्रम महिलाका एक साथीको फेसबुक पोष्टमार्फत् सोमबार चर्चामा आयो । एयरलाइन्सले यो घटनामाथि खेद जताएको छ ।
एमएसएन न्यूजका अनुसार टिफनी एडम्सले यो महिनाको सुरुमा उक्त विमानमा गरेको यात्राबारे आफ्नी साथीलाई बताएकी थिइन् । उनकी साथीले एयर क्यानडाको फेसबुक पेजमा यसबारे जानकारी दिइन् ।
उनले लेखिन्, ‘यात्राको क्रममा एडमको फोनको ब्याट्रि पनि सिद्धियो । यो उनका लागि एउटा खराब सपनाजस्तो थियो ।
यसबारे एडमले भनिन्, ‘यो घटनापछि म निदाउन सकिरहेको छ । सुत्न खोज्दा झसङ्ग ब्युँझिने गर्छु ।’
एयर क्यानडाले सिटिभी न्यूजसँग भन्यो, ‘हामी यो मामलामा अनुसन्धान गरिरहेका छौं । योभन्दा बढी जानकारी दिन सकिँदैन sourcehttp://pujabiitadka.com/
Prevगुडिरहेकै गाडीको सिटमा यात्रा गर्दा गर्दै अस्ताए लालबहादुर तर पत्तो पाएनन् कसैले
Nextनेपाल राष्ट्र बैंकमा कार्यरत आठ महिनाकी गर्भवती कृति थापाको मृत्यु
काठमाडौ महानगरको पपुलर मतमा एमालेकी सुनिताले पारिन् बालेन्द्र साहलाई पछाडी
नायक पल शाह र गायिका समीक्षा अधिकारीले गरे विवाहको लिखित सम्झौता ?
यी राशिमाथि रहन्छ सधैँ भगवान शिवको कृपा, हरेक मुस्किलमा मिल्छ साथ, हुँदैन कहिलै दुख